Ecotone Pocket ၏အမှောင်နှင့်အတူမူလနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောပလက်ဖောင်း | Androidsis
Ecotone Pocket သည်အဆင့်တစ်ခုစီ၏စည်းမျဉ်းများကိုပြောင်းလဲသည်
ကျနော်တို့ကပလက်ဖောင်းနှင့်အတူတနင်္ဂနွေကိုစတင်ပါ ဆက်စပ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ကြိုးစားပါ ကွဲပြားခြားနားသောစက်ပြင်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဂိမ်း၏ဤအမျိုးအစားရန်။ ၎င်းတို့သည်အခြေခံကျကျပြောင်းလဲသွားသည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ကစားသောအခါကစားခြင်း၏အရှည်၊ လမ်းကြောင်း၊ ရန်သူများသည်၎င်းတို့ကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်အချို့သောနည်းလမ်းများဖြင့်ပြုမူကြသည်။ ဤအရာအားလုံးသည်ပရမ်းပတာဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်ရမည့်အဆင့်များကိုကျော်ဖြတ်ရန် ပို၍ ခက်ခဲလိမ့်မည်။ ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပထမဆုံးပလက်ဖောင်းတွေပေါ်မှာဆယ်စုနှစ်များစွာကုန်လွန်သွားပြီဖြစ်လို့အချိန်အတော်ကြာချမှတ်ထားတဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုပြောင်းလဲဖို့ဗီဒီယိုဂိမ်းစတူဒီယိုအချို့ကိုပြုလုပ်နေပြီးဖြစ်သည်။
Ecotone Pocket သည်အဆင့်တစ်ခုစီကိုပရမ်းပတာဖြစ်အောင်လုပ်စေချင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာအဓိကဇာတ်ကောင်သည်အမြင့်တစ်ခုသို့ခုန်တက်လျှင်နောက်အဆင့်တွင်ဖြစ်ပျက်နိုင်သည် ခုန်တိုတောင်းပါစေ ဂိမ်းကစားခြင်းအားအစကနေစတင်နိုင်ရန်အတွက်သင့်အတွက်လာကြသောရန်သူအချို့ကိုရှောင်ရှားရန်သင်ပေးမည့်နေရာမှကောင်းစွာချိန်ညှိရမည်။ ပုံမှန်ပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်လှည့်ကွက်တစ်ခုသင်အဓိကဇာတ်ကောင်ကိုတစ်ခုချင်းစီကိုပြောင်းလဲစေမည့်ထိုအဆင့်များကိုဖြတ်ကျော်နိုင်အောင်ကူညီရန်သင့်အားအတိုဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှအချိန်တိုအတွင်း၊ သင်နောက်လာမည့်အဆင့်သို့သွားရန်စီမံရမည် ။
1 Steam PC မှ mobile သို့သွားသောဗီဒီယိုဂိမ်း
Steam PC မှ mobile သို့သွားသောဗီဒီယိုဂိမ်း
Ecotone Pocket ဂိမ်းတွေမှာဖန်တီးမယ့်ပရမ်းပတာဖြစ်မှုတွေအပြင်ကျွန်တော်တို့မှာဗွီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုရှိနေတာကိုယုံရမယ်။ ကြီးစွာသောလေထုကိုဖန်တီးခဲ့တယ် အတော်လေးဒီကဗျာဂရပ်ဖစ်စတိုင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအနည်းငယ်မှောင်မိုက်သောဇာတ်ကောင်များ၊ အခြားအင်ဒီအားကစားများကိုသတိရစေမည့်ရန်သူများနှင့် Alan Poe ၏မည်သည့်စာအုပ်မှမဆိုယူနိုင်သောပုံပြင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုဖြစ်စေသည်။ ၎င်းသည်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုအနည်းငယ်ငြိမ်သက်စေသည့်တေးသံရှိခြင်း မှလွဲ၍ ၎င်းအားဆက်လက်ကစားရန်အတွက်အချက်ဖြစ်သည်။
ဒီဗီဒီယိုဂိမ်းဟာလည်းaအဆုံးမဲ့ပြေးသမား အဓိကဇာတ်ကောင်သည်အပြေးမရပ်နိုင်သည့်နည်းဖြင့်၊ အခြားလှုပ်ရှားမှုစက်ပြင်များကိုသင်ရှာဖွေနိုင်သောအခြားဇာတ်ကောင်များသင့်လက်၌ရှိလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ပထမအဆင့်သည်အလျားလိုက်လှုပ်ရှားမှုတွင်အလုပ်လုပ်သည်။ ထိုနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုအဆုံးသတ်ရန်ပလက်ဖောင်းမှပလက်ဖောင်းသို့ခုန်ကြရသည်။ နောက်တစ်ခုကပထမဆန့်ကျင်ဘက်လမ်းကြောင်းကိုသွားလိမ့်မယ်၊ ဒါကြောင့်ငါတို့ရဲ့ခေါင်းကိုအရာတွေနေရာချရမယ်။ ၎င်းသည်၎င်းအားမူလအချက်ဖြစ်ပြီး Play Store ကို ၀ င်ရောက်လာသည့်အခြားပလက်ဖောင်းများနှင့်ခွဲခြားထားသည် Parallyzed အဖြစ်ပါရမီ.
အစမှာ ဒါဟာအတော်လေးရိုးရှင်းနိုင်ပါတယ်ဒါပေမယ့်ဒီအဆင့်တွေကိုဖြတ်သန်းပြီးစက်ပြင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟာအတော်လေးရှုပ်ထွေးတဲ့ဂိမ်းကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာအဓိကဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ရွေ့လျားပုံကိုကိုင်တွယ်နိုင်မယ့်အထိငါတို့အဆင့်မှာကိုင်တွယ်နေတယ်။
ပြီးတော့ငါတို့ရပါလိမ့်မယ် ထိန်းချုပ်ရန်ကွဲပြားခြားနားသောဇာတ်ကောင်ငါတို့ကဲ့သို့အခြားအဆင့်ဆင့်၌တွေ့လိမ့်မည်သည့်ကွဲပြားခြားနားသောရန်သူများကိုဖြစ်နိုင်သကဲ့သို့။ ဤသည်ကဂိမ်းပိုမို inri ပေးလိမ့်မည်ငါတို့အဘို့စောင့်ဆိုင်းသောသူအပေါင်းတို့အဆင့်ဆင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတခုတခုအပေါ်မှာတူးဖော်ရေးစေမည်။
Un မူရင်းဂိမ်း ၎င်းတွင်၎င်း၏ပုံပန်းသဏ္asာန်အဖြစ်ထင်ရှားသောနည်းပညာဆိုင်ရာလက္ခဏာများရှိသည်။ ၎င်းသည်ကြော်ငြာခြင်း၊ မိုက်ခရိုငွေပေးချေခြင်းနှင့်အခမဲ့ဂိမ်းများရှိရန် Google Play စတိုးမှအခမဲ့ဖြစ်သည်။
Ecotone Pocket သည်ဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည် အမြင်အာရုံကိုကြည့်ရှုပါ နှင့်၎င်း၏အဆင့်ဆင့်တစ်ခုချင်းစီရှိသည်သောကွဲပြားခြားနားသောစက်ပြင်၌တည်၏။ ဇာတ်ကောင်များ၏အမှောင်ကျသည့်ထိတွေ့မှုနှင့်ချိန်ညှိချက်များသည်အခြားအံ့ဖွယ်ရာများသို့မရောက်ရှိသော်လည်းအတော်လေးအောင်မြင်သည် မငတ်ပါနဲ့။ အိတ်ဆောင်ထုတ်ဝေမှု.
ရေးသားသူ: Sundae စက်ရုံ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ဂိမ်းများ » Ecotone Pocket သည်အဆင့်တစ်ခုစီ၏စည်းမျဉ်းများကိုပြောင်းလဲသည်
Bluboo Dual သည်စျေးနှုန်းချိုသာသောကင်မရာနှစ်လုံးပါ ၀ င်သောစမတ်ဖုန်းဖြစ်သည်